Base Station hihena - Jinghui Environmental Teknolojia Co., Ltd.
Nikarakara base peo hihena manan-tsaina mila rafitra;
Maro milina miasa foana 24/7 amin'ny fanafanana;
Afaka manara-maso sy hifehy lavitra ny toe-miasa amin'ny milina hafa nizara in base-pifidianana;
Ny fametrahana mazava tsara rivotra conditioners 'hery fanjifàna dia lehibe; fa mila mahafeno fepetra ho an'ny mpiasa sy ny fikojakojana ny fandidiana.
Dry rivotra dia ho voasakantsakan'ny handoro ny fifandraisana fitaovana, dia mitaky foana mari-pana sy ny hamandoana.
JH base toerana coolers rivotra dia manokana ho an'ny China Unicom, China Mobile, China Telecom sy China Post.
Ny China Union nametraka JH base toerana rivotra mangatsiaka kokoa ho an'ny hihena anatiny, dia mampiasa JH rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any setroka miasa mba hahatonga ny rivotra Izay mamorona ny fivezivezena ivelany, ary avy eo ny hafanana ao anatiny niteraka ny milina dia afaka ivelany.
Isika mametraka ny linkage damper afo ho an'ny rivotra inlets sy baovao mba tsy miparitaka ny afo, ary koa manome ny inlets baovao telo sy ny anti-harato mba hisorohana ny moka sy ny bibikely, sy ny fasika fanafihana;
Mampiasa indostrialy-kilasy mari-pana sy ny hamandoana sensor manangona ny anaty sy ivelan'ny trano mari-pana sy ny hamandoana havany, amin'ny alalan'ny algorithms tsaina mifehy ny hafainganam-pandeha sy ny mpankafy linkage fotoana mba hahazoana antoka fa ny efitrano tsy tapaka mari-pana sy ny hamandoana.
Hihena ny tena izy:
Under niara-niasa tamin'ny manan-tsaina ny hafanana sy ny hamandoana fanaraha-maso, ny mari-pana sy ny hamandoana an-trano mandrakariva ao anatin'ny toe-javatra maso isan-karazany, tsy voasakantsakan'ny loza hitranga eo amin'ny faritra solaitrabe.
Ny teo aloha famerana mari-pana dia tsy mba noravana, fa ao amin'ny mafana fahavaratra raha ny rivotra mangatsiaka kokoa tsy afaka hihaona amin'ny hihena takina, JH rivotra coolers 'manan-tsaina fanaraha-maso dia tonga dia hiverina amin'ny teo aloha famerana mari-pana mba hampangatsiaka ny efitrano, ny roa karazana hihena rafitra afaka miara-miasa .
Nandritra ny taona, ny fampiasana ny evaporative rivotra coolers mahatonga ho eo ho eo amin'ny 70% ny fotoana, ambony ny hafanana sy ny orana Weather toe dia mampiasa misy marina tsara famerana mari-pana, ary dia tokony ho 30% ny fotoana ho an'ny fampiasana, dia toy izany no ao amin'ny fanao isan-taona isika dia afaka mamonjy 56% vidin'ny herinaratra.